Dowladda Sacuudiga oo lagu eedeeyay qaxooti Soomaaliyeed ciidan inay u qoratay – Radio Daljir
Dowladda Sacuudiga oo lagu eedeeyay qaxooti Soomaaliyeed ciidan inay u qoratay
Abriil 23, 2012 12:00 b 0
Tehran. Apr 23 -Dowladda dalka Iran ayaa ku eedaysay boqortooyadda Saudi Arabia in uu qoranayo ciidamo Somali sunniyiin ah, si loola dagaalamo kooxaha Shiicadda Xuutiyiinta ah Zeydiyiinta dalka Yemen oo iyagu maamula dhul balaadhan oo ka mid wadanka Yemen; kana faa?iidaystay mashaqadii iyo deganaansho la?aantii dalk Yemen ,islamarkaana isku fidiyey dhul aanay horey u maamuli jirin.
Wakaaladda wararka ee dalka Iran ee Fars ayaa sabtidii aan ka soo gudubnay ku warantay in dalka Sucuudigu uu bilaabay hirgelinta qorshe uu ku qoranayo qaxooti Somali ah oo ku noollaa dalkaasi Yemen ,iyadoo u jeedadu tahay in loo diro gobolada Sacda iyo Xajjah ee dalka Yemen, halkaasi oo ay ku xooganyihiin falaagada Xuutiyiinta ee shiicadda ah;lana rumaysanyahay in ay taageero ka helaan dalka Iran.
Ciidamada Somalida ah ee immika uu qortay dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa lagu wadaa in ay dagaal ba?an ku qaadan kooxaha shiicadda ah , si ay cagta u mariyaan falaagadaasi.
? ku dhowaad 1300 qof oo qaxoti Somali ah oo markii hore ku noolaa dalka Yemen ayaa loo qaaday dhinaca dhulka ku teedsan xadka kala qaybiya Saudi Arabia iyo Yemen , Somalidaasi ayaa lagu tababarayaa xeryo Militari oo ay leeyihiin ciidamada Sucuudiga , waxana guutadaasi marka ay tababarka dhamaysato dib loogu celinayaa dalka Yemen , si ay ula dagaalamaan kooxdaXuutiyiinta? sidaasi ayaa lagu sheegay war ay soo tebisay wakaalada fars ee wararka u faafisa dalka Iran.
Sida ay soo tebisay wakaaladda Fars ee Iran qorshahan lagu askaraynayo qaxootiga Somalida ayaa waxaa Saudi Arabia ku weheliya dalka Maraykan,iyadoo qorshuhu yahay in meesha laga saaro kooxaha islaamiyiinta shiicadda ah iyo mintidka kale.
Kooxda hubaysan ee Xuutiyiinta oo ka tirsan firqada Zeydiyiinta ee shiicadda ah ayaa sanooyinkii ugu dameeyey ku jirtay dagaal ka dhan ah dowladda Yemen, waxana ay dalbanayeen ismaamul hoosaad ay iyagu leeyihiin, iyagoo si weyn uga horjeeday guud ahaan siyaasadaha Saudi Arabia gaar ahaan qorshayaasha Riyadh ee ku aadan arrimaha gudaha ee dalka Yemen.
Kooxda Xuutiyiinta oo la rumaysanyahay in ay taageero ka helaan dalka Iran ayaa ku eedaysa boqortooyada Sunniga ah ee Saudi Arabia in ay ka dameyso mashaqada ka oogan dalkaasi saboolka ah ee ku yaalla gacanka ee Yemen.
Falaagadani Xuutiyiinta ah ee dalka Yemen ayaa dagaal dhinaca xadka ah la gashay ciidamada dalka boqortooyada Saudi Aarabia, waxana dagaalkaasi oo ciidamada Sucuudigu ku galeen ciidda Yemen uu ku dameeyey natiijo la?aan,iyadoo askar badan laga dilay ciidamada Sucuudiga.
Boqortooyadda Saudi Arabia ayaa ka walaacsan is balaadhinta kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen , gaar ahaan dhulka xadkeeda ku dhow, waxana Riyadh ay dowladda dalka Yemen ku boorisay in ay xukunkeeda gaadhsiiso dhulka ay ku fidayaan xuutiyiintu.
Kooxda xuutiyiinta ayaa hore u qafaashay Somali qaxooti ah , islamarkaana dagaal geliyey, waxana warkaasi xaqiijiyey xukuumaddii hore ee Yemen.
Somali fara badan ayaa bilihii ugu dameeyey lagu dilay gobolka koonfurta dalka Yemen ku yaalla ee Abyan ,iyagoo ka barbar dagaalamayey kooxda Al-qaacidada Jaziiradda Carbeed ee fadhigeedu yahay dalka Yemen.
Boqolaal Somali ah oo taabacsanaa kooxda Al-shabab oo ah farac ka mid ah Al-qaacida ayaa la soo weriyey in ay tageen dalka Yemen, iyagoo ku biiray kooxaha mintidka ah sida garabka Ansaaru Al-shariica.
Xilligii uu kacdoonka dadweyne ka socday dalka Yemen ayaa waxaa soo baxayey warar sheegaya in madaxweyneihii hore ee dalkaasi Yemen Cali Cabdalla Saalax uu qortay askar Somali ah si ay isaga u difaacaan,arrintaasi oo ka cadhaysiisay dad fara badan oo reer Yemen ah.
Somalida oo lagu soo dhoweeyey dalka Yemen wixii ka dameeyey burburkii dowladii dhexe ee Somalia ayaa xilliyadii ugu dameeyey waxaa meel sare gaadhay nacaybka loo qabo ,maadaama ay ku lug yeesheen arrimihii gudaha ee dalka Yemen gaar ahaan qolyaha mintidka ah oo ay ka barbar dagaalamaaan.
Dadka la socda arrimahan ku aadan kaalinta Somalida ee dalka Yemen ayaa saadaalinaya in dhinacyada kala aragtida duwan ee dalka Yemen ay bartilmaameedsankaraan Somalida,marka la eego ku lug lahaanshahooda xaaladaha gudaha ee dalkaasi.
Abdirashid Musse Sa’ed
War Saxaafadeed ? Soomaaliya oo qaadaneysa dastuur cusub.
Dowladda Kenya oo safaaradeeda dib uga furanaysa Soomaaliya